त्रिपक्षीय पहलबाट मात्र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न सकिन्छ : प्रअ बुढामगर – ebaglung.com
२०७५ माघ १०, बिहीबार १७:३५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
ज्ञानेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय निसीमा तीन जना सरकारी शिक्षक दरवन्दी रिक्त !
कविता घर्तीमगर, निसीखोला, २०७५ माघ १० । यतिबेला देशका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर साह्रै नाजुक छ । त्यहि नाजुक अवस्था मध्येको एक हो बागलुङ जिल्लाको पश्चिम निसीदोला गाउपालिका ५ मा अवस्थित ज्ञानेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय । धेरै जसो मगर र दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी शिक्षामा निकै कम्जोर रहेका छन् । शिक्षकको शिक्षण सिकाईको कम्जोरीले आफ्नो बालबच्चा पढाईमा कम्जोरी भएको अभिभावकको आरोप रहेको छ । “आफ्नो छोराछोरीलाई खाई नखाई दिनरात दुःख गरेर स्कुल पठायो, खै मास्टरहरुले के पढाउदा रहेछन केहि जान्दैनन् भन्दै मनभरी पिर पोख्छन सीताको बाबा ईमान ।” “अलिकति पैसावाल भए राम्रै ठाममा राम्रै शिक्षादीक्षा दिईन्थ्यो छोराछोरीलाई पैसा नभएर सरकारी स्कुलमा पढायो ,जताबाट पनि पछि पर्ने भनेको गरिव नै रहेछ । उनले खै के के भन्दै गुनासो पोख्दै थिए । उनी एउटा प्रतिनीधि पात्र मात्र हुन । गाउभरीका स्थानिय अभिभावक यसरी नै गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
सरकारी स्कुलमा शैक्षिकस्तर सुधार गर्नको लागी सरकारले पछिल्लो समयमा सेवासुविधा दिएको छ तर उक्त विद्यालयले भने विभिन्न विषयमा शुल्क असुलेको समेत विद्यार्थीको आरोप छ ।
यता त्यस स्कूलबाट एसईई परीक्षाबाट पास भयो कलेज पढने भनेर पोखरा आएको अंग्रेजीमा ग्रेडिङ नपुगेपछि उनि कलेज पढनबाट बन्चित भए ललित मगर । अहिले उनी फेरी अर्को साल एसईई दिने भनेर पोखराकै एक होस्टेलमा तयारी कक्षा लिदैछन ।
यसरी सरकारी विद्यालयबाट एसईई दिएर निस्केका विद्यार्थी बाँकी शैक्षिक यात्राको लागी अयोग्य भए ? आखिर यो समस्या किन छ त भन्ने विषयमा ज्ञानेन्द्र माविकी प्रधानाध्यापिका अमृता बुढामगरसंग जिज्ञासा राख्दा उनले आफनो विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर कम्जोर भएको स्वीकार्दै यो समस्याको समाधान गर्न त्रिपक्षीय पहलबाट मात्र सम्भव हुने बताएकी छिन ।
“सरकारी विद्यालयको विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर सुधार गर्नको लागी एउटा विद्यालयको शिक्षकले मात्र पहल गरेर सम्भव हुदैन” उनी भन्छिन् ,“सवै भन्दा पहिले स्वयं विद्यार्थीले अन्तरआत्माबाट पढाईको महत्व र पढाईप्रतिको रुचि जगाउनुपर्छ त्यहि अनुसार मेहनत गर्नुपर्छ, उता अभिभावकले उनिहरुलाई घरमा पनि विहान बेलुकी पढ्ने वातावरण मिलाईदिनुपर्छ, आफ्नो बालबच्चा पढाईप्रति सजग छ छैन शिक्षकसंग नियमित जिज्ञासा राख्नुपर्छ, छोराछोरी गलतबाटोमा छ भने खवरदारी गर्न सक्नुपर्छ अनि यता स्कुलमा शिक्षकले मेहनतका साथ शिक्षादीक्षा दिनुपर्छ अनि मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधारमा सफल भईन्छ, शिक्षकलाई मात्र एकोहोरो दोष दिनु गलत हो । ”
विद्यालयको भौतिक संरचना, सरकारीस्तरबाट पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दी र विद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागी गठन गरिएका समुहहरुको सक्रियता आवश्यता रहेको उनको ठहर छ ।
उक्त विद्यालयमा निसीखोला गाउपालिकाका विभिन्न स्कूलबाट विद्यार्थी थपिदै जाने भएकोले दैनिक रुपमा करिव ८ सय विद्यार्थी हुन्छन् । विद्यार्थीको चाप बढि तर त्यहि अनुसार सरकारले आवश्यक शिक्षकको दरबन्दीको ब्यवस्था नगरि दिदा विद्यालयलाई निकै समस्या भएको प्रअ को गुनासो छ ।
आवश्यकता भन्दा बढि विद्यार्थीको संख्या भएपछि शैक्षिक स्तर सुधार र ब्यवस्थापनको लागी विद्यार्थीबाट केहि शुल्क लिई नीजिस्रोतबाट शिक्षक राखेकोले शुल्क लिएको समेत स्पष्ट पारेकी छिन ।
उनका अनुसार अहिले विद्यालयमा प्राविमा सरकारबाट सबै शिक्षकको दरबन्दी पुरा छ भने निमाविमा ४ जना हुनुपर्नेमा जम्मा ३ जना मात्र र माविमा ५ जना शिक्षकको दरबन्दी रहेकोमा जम्मा ३ जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका शिक्षक रहेका छन । आवश्यक शिक्षकको गाउपालिका तथा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्दा समेत कहिकतैबाट सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । विद्यार्थी संख्या अनुसार सरकारबाट आवश्यक शिक्षक दरबन्दी पुरा भए मात्रै विद्यालयको शैक्षिक स्तर सोचे अनुरुप हुने उनको ठम्याई छ ।
विद्यालयको अवस्था खस्किदै गएको भन्दापनि विद्यालयको संरचना र ब्यवस्थापनमा सुधार गर्दै जाने क्रम जारी रहेको विद्यालयका अभिभावक समितीका अध्यक्ष थमन घर्तीमगरले बताए । उनका अनुसार यस ठाउका अधिकांस विद्यार्थी घरमा बाबाआमालाई नटेर्ने ,जनजाति बाहुल्यता भएकोले पढाईमा भन्दा जाँडरक्सी र कुलत दुव्र्यसनी तथा लडाई झगडामा बढि सक्रिय हुने गरेकोले पनि विद्यालय तर्फ केन्द्रित गर्न गार्हो भैरहेको बताएका छन ।
उक्त स्थान एकतर्फ अभिभावकमा जनचेतनाको कमी र रुढीबादी परम्पराहरुबाट प्रभावित भएकोले यो समस्या भएको उनको ठम्याई छ । उक्त विद्यालयमा यो बर्षबाट नर्सरी कक्षा समेत सञ्चालन गरि पठनपाठन गरिएको छ । साथै अव तहगत रुपमा अभिभावक समिती गठन गर्ने योजना रहेको विद्यालय ब्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष प्रेम घर्तीमगरले बताएका छन । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दिको पहल भैरहेको उनको भनाईरहेको छ ।
यस बर्षबाट कक्षा ११ समेत सञ्चालनमा ल्याईएको छ । तर सरकारी स्कूलमै कार्यरत शिक्षकहरू आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निजी स्कूलमा पढाउँछन् । कतै नक्कली संख्या देखाएर शिक्षकहरूले जागिर बचाएका छन् भने कतै खेताला शिक्षक राखेर पनि जागिर खाने र आफू अन्य काममा लाग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारी समस्या त पुरानै हो । एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूमध्ये बर्षेनि २५ प्रतिशत मात्रै सरकारी विद्यालयबाट पास हुने गरेका छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत निजी विद्यालयबाट । यो अहिले मात्र देखिएको समस्या होइन । यसो भनिरहँदा सरकारी शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मात्र दोषी देखाइने गरिएको पनि छ । उनीहरूका पनि कमजोरी त होलान्, तर केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली नै यसमा मुख्य दोषी छ ।
सरकारले बजेटमात्र खन्यायो, उपलब्धि के होला भनेर कहिल्यै सोचेन । न शिक्षाक्षेत्रका विकृतिहरूमाथि निगरानी नै राख्न सक्यो ।अनुगमन पनि छैन । शिक्षा मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । यो जल्दोबल्दो विषयमा सम्बन्धित निकायले सरकारी संस्थाको समस्याको पहिचान ,निगरानी र समाधान गर्न अतिनै आवश्यक छ ।